TRUESTORY: လင်းယုန် နဂါး မာဖီးယား ကစားတဲ့ကွင်းမြန်ပြည်ဖြစ်နေခြင်း
လင်းယုန် နဂါး မာဖီးယား ကစားတဲ့ကွင်းမြန်ပြည်ဖြစ်နေခြင်း
မြောက်ကိုးရီးယား ပဋိပက္ခသည် ဘယ်သူကစပြီး ဘယ်သူက ကြိုးကိုင်နေသလဲ ထဲထဲ ၀င်ဝင် ဘယ်သူတွေးသလဲ ပြောရရင် ကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပေးနေသလဲကိုပွကြီးရဲ့အာရှပစ္စိဖိတ် ခြေဆန့်လက်ဆန့်မဟာဗျူဟာအခင်းအကျင်းအတွက် ကင်စမောလ်လေးကို တိုက်ချင်းပစ် ဒုံးစမ်းလာအောင် ကုလနဲ့တည်ပေးပြီး ပူတင်တို့ ရှီကျင့်ဖျင်တို့ကိုလည်း မငြင်းသာ ခွာပြဲ တောင်ဘက်က မမတို့ဆီက ပိုက်ဆံလည်းရ မဟာဗျူဟာ လည်းဂွင်အကျ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို ရန်စသလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပြ ဒါသေချာကြည့်ရင် calendar ကျရိုက်ကွက်ဆိုတာ မြင်လာရသလိုပါပဲ။ ကိုကြီးပွရဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင့် ၁ ကလျှောမကျရေးနောက်ဆုံးဆေးလည်းဖြစ် ပေါက်ဖော်နဂါးကြီးကို ၂၀၅၀ မှာကျော်တက်မလာအောင် ဒီမတိုင်မီ ဆွဲချထားနိုင်ဖို့ နဂါးခြေနဂါးလက်တွေကိုချုပ်ထားနိုင် ဖို့ ဆိုရင်အာရှပစ္စိဖိတ် နဂါးထိန်းချုပ်ရေးမဟာဗျူဟာအတွက် ကင်စမောလ်လေးဟာ အစပျိုးဖို့ အကောင်းဆုံး hard. attack ဖန်တီးမှုတစ်ခုဆိုတာပေါ်လာသ လို သေချာပြန်စဉ်းစားရင်သူများတွေ ကိုဘေးဘီ ပဲကြည့်နေတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မမြင်သလိုဖြစ်နေတြယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ပြန်ကြည့်ရင် ကိုကြီးပွ စခဲ့တာ မြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုရင် မလွဲနိုင်ဟုဆိုရမည့် Soft power ဖြင့် စတင်နေခြင်း ဟုဆို ပါမည်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။
မြန်မာနိုင်ငံအပြောင်းအလဲဟာ ဘပြောင်တကယ်လုပ်နေသလို ကိုကြီးပွ ဟာ ၂၀၀၈ ကစလို့ ၂၀၁၀ အရွေ့ ဒီနေ့ထိ အရင်အနေအထားနဲ့ပြောရရင် ကိုကြီးပွကျေနပ်လက်ခံမှာမဟုတ်ပါ။
ဒါပေမဲ့ ကိုကြီးဟာ မထင်မှတ်လောက်အောင်ပဲ strategy ပြောင်းပြီး ခြင်္သေ့ခေါင်းထွက် အာဏာ စက်ရလာတာကို အားပေးကူထောက် မာမီစုပါ လွှတ်တော်ထဲရောက်အောင်တွန်းပို့ခဲ့တာ ဒါ အိုဘားမားရဲ့ Smart. Power အခင်းအကျင်းလို့ မြင်မကြည့်သင့်ဘူးလား စဉ်းစားကြပါ။ ဒီနေရာမှာ မဟာဗျူဟာထဲမှာမြစ်ဆုံကစလို့. ကအိုင်အေနဲ့လုံးနေရတာ ကျောက်ဖြူပိုက်လိုင်း လက်ပံတောင်း ဒီ အပြောင်းဒီအတောင်းတွေဟာ ဖြုတ်သာသာ အကာလောက်ပဲရှိတဲ့ ရှစ်ပူး ဗကသ ဘက ဒီငပွတွေ ရဲ့ဦးဏှောက်ကထွက်နေတာထင်ရင်မှားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ပြန်ကြည့်ပါ ကိုကြီးပွဟာ မဟာဗျူဟာ တစ်ချက်မှားသွားလို့ ကုလားနဲ့စပေးခဲ့တဲ့မီးကြောင့် ဒီနိုင်ငံ ဒီလောက် တည်ငြိမ်နေတာပါ။အကယ်လို့များ ကုလားနဲ့မမဟုတ်ဘဲ တရုတ်နဲ့သာမီးမွှေးပေး လိုက် ရင် ကေအိုင်အေ နဲ့တောင်ဖြစ်ချိန်မရဘဲ နဂါးနဲ့ ၂ ပါးသွားနေရလောက်တာကြာပေါ့။
ဂျော့ခ်ျဆိုးရော့ မပါဘဲ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ပြဿနာမပြေနိုင်ပါ ထိုနည်းတူစွာ ဂျော့ခ်ျဆိုးရော့ မကူဘဲ ဆူ တာ လှူတာ ပွင်လင်းတာတွေ လိုက်မဟောနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့် tiger ယောင်ဆောင်နေတဲ့ pond ကလေးတွေဖြစ်တဲ့ ဟော ပြော ဖွ ဆွ ပြ လုပ်နေကြတာဟာ ရိုးသားပါသလား ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်အဖွဲ့ အစည်းက ဘယ်လိုကြိုးကိုင်နေတာလဲ ဆိုတာသာမြင်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်-----
ကဲမေးပြီဗျာ ခင်ဗျားတို့. (((( ပါတီများ အမတ်များ နိုင်ငံရေးသမားဆိုသူများ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ များ ဟိုအော်ဒီအော်များ ကိုထောင်ထွက်များ ဟိုအဖွဲ့ ဒီအဖွဲ့များ ၀ါဝါမြင်တိုင်းရွှေမဟုတ်သူများ ---ပြည်တွင်းပြည်ပပြည်ချစ်သူများ ----စသော )))) ဒါတွေစဉ်းစားပြီးပြီလား ဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲ? ???
နောက် ၁ ချက် ---ပါးရိုက်ခဲ့တဲ့ ဂျပန်၊ စောင့်ကန်ခဲ့တဲ့ဂျပန်၊ လက်သည်းခွံ ခွာခဲ့တဲ့ဂျပန်၊ ကိုကြီးပွ ကို မလှန် ရဲတဲ့ ဂျပန် တစ်ဖန်ပြန်ပြီးကူညီနေပြန်ပြီ။ ပြန်စဉ်းစား ဗိုလ်ချုပ်တို့ အင်္ဂလိပ်ကိုတော်လှန် ဖို့. စစ်ပညာသင်ပေး ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ဂျပန် ခုတစ်ဖန်ပြန်ပြီး ထောက်ပံ့ပေးပြန်ပါပြီ ကျေးဇူး တင်စရာ ထင်ရပေမဲ့ မြင်ရတာ ရဲ့နောက်ကွယ်က မမြင်ရ သောလက်များလို့ဆိုရမဲ့ ကိုကြီးပွရဲ့ လက် ပွားတွေ များမဖြစ်နိုင်ဘူးလား သူကလည်း နဂါးကိုတွယ်ချင်သူပဲလေ သေချာတွေးလေ. ဟုတ်သ လိုဖြစ်လေပါပဲ။
ဘပြောင်ကို အကြွေးတွေဆပ်ပေးပြီး ကျေးဇူးတင်မျက်နှာနာအောင်လုပ်ပီး တစ်ဖက်မှာ UNFC. ကိုစင်တင်ပေး အကုန်ထောက်ပံ့ပေးနေတာ စစ်ရေးက ကိုကြီးပွ နဲ့တစ်မျိုး ကိုယ်တိုင် တစ်ဖုံ ကေအိုင်အေ. နဲ့ UNFC. ကို ရဲဘော်သုံးကျိတ်စတိုင် မြန်မာပြည် ပြည်ထောင်စုကခွဲထွက် အသက်ဆက်ပေးနေတာ ဗိုလ်တို့အင်္ဂလိပ်ကိုတော်လှန်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့ သဏ္ဍန်တူနေတာဟာ ခဲတစ်လုံး ငှက် ၂ကောင် ဗမာ ၁ကောင် နဂါး ၁ကောင် ပစ်တာများလား ။
လင်းယုန်နဲ့ မာဖီးယား ပေါင်းထားတဲ့ဆေးခါး မှားမသောက်မိစေဖို့ ဘပြောင် ဘအောင် တို့အခင်း အကျင်း ဘမန်းတို့ ဆွဲသွင်းကာရှင်းပါမှ သာယာလှပခြင်းဆိုတာတွေ မြန်ပြေမှာ ရနိုင်သလို စစ်တပ် ကို ပဲဗျင်းနေကြတာဟာလည်း Smart. Power. အခင်းအကျင်းလို့ပဲထင်မိတာမို့။
ဒီတစ်ခါ KIA.ရဲ့ C4U+S. အခင်းအကျင်းနဲ့ဆွေးနွေးမဲ့အရေး မတိုင်မီ
လွှတ်တော်---ဗျို့.လွှတ်တော်လို့ လွှတ်အော်ပြီးဇွတ်ခေါ်ကာ မြန်ပြည်အနာဂတ်အရေး လေးလေး နက်နက်တွေး အပြေးတက်ကလေးနဲ့
C4U + S တောင်ပါသေးတာ လွှတ်တော်ဟာဘာမို့ချန်ထား ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ် ပြည်သူ့ ဆန္ဒ ပြည်သူ့သဘောထား ပြည်သူ့ လိုအပ်ချက် C4U + S အထက်မှာလွှတ်တော် မပါရင် မြန်ပြေ တစ်ပိုင်းတစ်စစတောင်းကြခွဲကြမဲ့အရေးထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးလွှတ်တော်ပါဝင်ရေးအရေးပေါ်ခေါ်. တင်သွင်းတော်မူကြပါဗျို့.